Daawo Sawirada Diyaaradaha Dagaalka Ruushka oo Duqeyn ay dad badan ku dhinteen ka fuliyay Magaalada… – Kismaayo24 News Agency
by admin 8th November 2015 9th November 2015 060
Diyaaradaha Dagaalka Ruushka ayaa duqeyn ay dad badan oo shacab ah ku dhinteen waxa ay ka fuliyeen saacdaihii lasoo dhaafay Magaalada Douma ee dalka Siiriya, magaaladaasi oo gacanta ugu jirta xoogaga mucaaradka ku ah Xukuumada Bishaar Al-Asad.
Duqeynta ayaa lala beegsaday goob mashquul badan oo kutaala bartamaha Magaalada Douma, waxaana Duqeyntaasi inta la xaqiijiyay ku dhintay 23-qof oo shacab ah oo lix kamid ah yihiin Caruur, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad kale oo badan.
Kooxda la socodka Xaaladaha bini’aadanimo ee dalka Siiriya ayaa xaqiijisay weerarkan dadka badan lagu yaalay ay fuliyeen Diyaaradaha Dagaalka Ruushka, waxaana lasoo bandhigay sawiro muujinaya dhibaatada ka dhalatay duqeyntaasi.
Dowada Ruushka ayaa ku biirtay dagaalka ka dhanka ah kooxaha mucaaradka ku ah Dowlada Siiriya iyo kuwa Islaamiyiinta ah, waxaana Ruushka duqeymo ay ka fuliyeen gudaha Dalka Siiriya ay waxyeelo badan kasoo gaartay dad shacab ah.
Waqtiga ay dhaceyso Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo la shaaciyay
Siyaasiyiintii Axmed Madoobe heshiiska la gaaray oo Xabsi Guri la dhigay+Dhageyso
admin 8th August 2015 27th August 2015
Daawo: Xildhibaanadii ugu badnaay oo Xalay Madaxweyne Farmaajo kala Hadlay Dilkii Wasiir Siraaji iyo Sababta ilaa iyo hadda….